कउचसर्फिंग भनेको के हो | यात्रा समाचार
कोचसर्फिf संसारमा कहिँ पनि नि: शुल्क रहनका लागि एक तरीका हो त्यसैले यदि तपाईं यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ तर पैसाको अभाव छ भने, यो उत्तम समाधान हुन सक्छ। यो एक भर्चुअल समुदाय हो जहाँ विश्वभरका व्यक्तिहरूले अन्य यात्रुहरूलाई स्वतन्त्र निवास प्रस्ताव गर्छन् या त सोफाको रूपमा (सोफे अंग्रेजीमा) वा एउटा कोठा।
1 यसले कसरी काम गर्दछ?
2 कउचसर्फिंगले अरू के प्रदान गर्दछ?
3 काउचसर्फिंगका फाइदाहरू
4 कउचसर्फिंगको बेफाइदाहरू
5 राम्रो अनुभवको लागि सुझावहरू
5.1 उपहार ल्याउनुहोस्
5.2 आफ्नै खाना किन्नुहोस्
5.3 तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ सहयोग गर्नुहोस्
5.4 छोटो भेट
5.5 राम्रो दृष्टिकोण
प्रक्रिया सरल छ। यस प्रकारको आवासमा रुचि राख्नेहरूले भर्खरको लागि सोफसर्फिing वेबसाइटमा नि: शुल्क दर्ता गर्नुपर्नेछ र प्रोफाइल सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, एक विश्वव्यापी समुदाय निर्मित छ जसले बाधा तोड्न, व्यक्तिलाई भेट्न र विश्व अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि रहनका लागि अनुरोध गर्दा, तपाइँ आफैले परिचय दिनुहोस् र तिनीहरूको देश जान्नको लागि तपाइँको रूचि वर्णन गर्नुहोस्, तपाइँले गर्न चाहानुभएको मार्ग र तपाइँ तिनीहरूको संस्कृतिको बारेमा के जान्न चाहानुहुन्छ।
कउचसर्फि only मात्र कार्य गर्दछ जब दुबै पक्षले केहि दिन्छ र प्राप्त गर्दछ: मित्रता, चाखलाग्दो किस्से र आतिथ्य।
कउचसर्फिंगले अरू के प्रदान गर्दछ?
केवल आवास मात्र होइन यात्रुहरूलाई भेट्ने सम्भावना पनि कफि पाउन र उनीहरूलाई शहर देखाउन। यो एक धेरै राम्रो विकल्प हो यदि, एक पाहुनाको रूपमा, तपाईंले अन्य व्यक्तिहरूसँग फ्ल्याट साझेदारी गर्नुहुन्छ जो यस प्रकारका भ्रमणहरू लिन उत्सुक छैनन्।
यो धेरै सस्तो छ: कोचसर्फिंगको उद्देश्य भनेको केहि पनि खर्च नगरी घरको सुत्न हो त यो धेरै आर्थिक हो। यद्यपि यो एक सभ्य इशारा मानिन्छ कि पाहुनालाई उपहार दिन वा एक दिन उसलाई खाजामा आमन्त्रित गर्नु।
सांस्कृतिक आदानप्रदान: कउचसर्फिंगले तपाईंलाई स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहन अनुमति दिन्छ। यस दृष्टिकोणले कुनै पनि ठाउँ र सामाजिक वर्गका व्यक्तिहरूसँग मित्रता गाँस्न सम्भव बनाउँदछ। होस्टहरूले ठाउँको फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् जुन यात्रीले भ्रमण गर्ने जुन उनीहरू अन्यथा हुँदैन। रिभर्समा पनि त्यस्तै हुन्छ।
छोटकरीमा, कउचसर्फिले तपाईंलाई मात्र विश्वभरि नयाँ साथीहरू बनाउन अनुमति दिँदछ, तर अन्य संस्कृति, परम्परा र जीवनलाई व्यक्तिगत तरीकाले बुझ्ने तरिका जान्न पनि।
अनिश्चितता: एक तरिकामा, कउचसर्फिaभनेको चिट्ठा हो किनकि तपाईंलाई कहिले थाहा हुँदैन कि तपाईं कसको भित्र पस्दै हुनुहुन्छ। प्रोफाइल र सन्दर्भ प्रणालीको बावजुद, त्यहाँ धेरै विवरणहरू छन् जुन तपाईंलाई होस्ट वा पाहुनाको बारेमा थाहा हुँदैन सहवासको क्षण सम्म।
कार्यको कम स्वतन्त्रता: यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता होस्टहरू छन् जसले आफ्नो घर उधार दिन्छन् जस्तो कि यो एक होटेल हो (उनीहरूले केवल तपाईलाई प्रस्थान मिति सोध्छन् र तपाईंलाई चाबी दिन्छन्), सामान्यतया जब तिनीहरू सोफेसर्फि participateमा भाग लिन्छन् भने उनीहरू पनि आफ्नो पाहुनासँग बस्न र सँगै केहि गतिविधिहरू गर्न रुचि राख्छन्। सबै पछि, तपाई कार्य गर्न सक्नुहुन्न जस्तो तपाई पूर्ण एक्लो यात्रा गरिरहनु भएको छ। तिनीहरूको आतिथ्य स्वीकारेर उनीहरूलाई तपाईंको केही समय दिन बुद्धिमानी हुन्छ।
राम्रो अनुभवको लागि सुझावहरू
जुन क्षण होस्टले सर्फरको अनुरोध स्वीकार गरे पछि सर्फर उनीहरूको पाहुना बन्छ। तपाईं आफ्नो घर प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कदर देखाउन उपहार दिन भन्दा कम केहि। तपाईं उसलाई तपाईंको देशबाट के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ वा सोझै उनलाई चकित पार्न सक्नुहुन्छ। यो एक विवरण जुन तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ र एक सुखद बसाई को दिशा मा पहिलो कदम हुनेछ।
आफ्नै खाना किन्नुहोस्
होस्टले तपाईंलाई उनीहरूको छानामुनि सुत्न अनुमति दिन्छ तर मर्मतको लागि भुक्तान गर्नु पर्दैन। त्यसोभए तपाईं आइपुग्ने बित्तिकै, नजिकैको सुपरमार्केटको लागि सोध्नुहोस् र तपाईंलाई आफ्नो बसाइको बेलामा चाहिने चीजहरू खरीद गर्नुहोस्। जे होस् तपाईसँग भान्साकोठा तपाईसंग रहेको छ भने पनि खानालाई घोप्टो नल्याउनु नै उत्तम हुन्छ।
तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ सहयोग गर्नुहोस्
तपाईको पहुँचमा भएको सबै चीजसँग सहकार्य गर्न कम्तिमा कम्तिमा कम्तिमा पनि रहनुहोस् कि तपाईको बसाई सकेसम्म रमाइलो नै होस्। यदि तपाईं बस्ने कोठामा सोफामा सानो ठाउँ छ भने, आफ्नो सबै चीजहरू संगठित गर्न कोसिस गर्नुहोस् र तपाईंको होस्टलाई सोध्नुहोस् कि ऊ कुन समय उठ्छ। यी सबै धेरै स्पष्ट देखिन्छ, तर यो जोड दिन यो सधैं राम्रो हो।
भनाइ छ भने राम्रो छ भने संक्षिप्त, दुई पटक राम्रो। त्यसकारण आवश्यक भन्दा लामो लामो यात्रा नगर्नु राम्रो हो। सामान्यतया यो मानिन्छ कि तीन वा चार दिन पल्टनको लागि उत्तम समय हो किनकि यसले तपाईंलाई शहर पत्ता लगाउन र थकित नभएको आफ्नो होस्टलाई भेट्न अनुमति दिन्छ।
अप्रत्याशित को सामना मा, एक राम्रो दृष्टिकोण राख्नुहोस्। कउचसर्फिंग, साथै यात्रा गर्न, तपाईसँग सबै प्रकारका व्यक्ति र अनुभवहरूका लागि खुला दिमाग हुनुपर्दछ।
यसैले संक्षेपमा भन्नुपर्दा, म तपाईंलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि यस कउचर्फिंग स्रोतको साथ सस्तो यात्रा र पैसालाई अनुकूलन गर्न सम्भव छ, र त्यो आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्नुको साथ तपाईं व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न र कुराकानी गर्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईं गर्नुहुन्न। अन्यथा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » सोफे सर्फिंग के हो